Facebook အတွက် အကူအညီ လေးတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါခင်ဗျ။ - MYSTERY ZILLION
Facebook အတွက် အကူအညီ လေးတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါခင်ဗျ။
November 2014 in Internet & Email
iphone က Facebook app မှာ Comment ကိုကြတော့ Copy ယူလို့ရတယ်ခင်ဗျ . Status က စာသားတွေကြတော့ယူလို့မရဘူး ။ ကျနော် Cydia tweak တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flex tweak ရဲ့ Cloud မှာ သူများလုပ်ပြီးထား " resume playback " Patch သွင်းလိုက်ကြည့်တယ် အဆင်ပြေတယ်ဗျ ။ ကျနော် Facebook မှာလည်း အဲလိုပြင်လိုက်ရမယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျ Status က စာသားတွေကို ကော်ပီ ယူဖို့ ကျနော် ဖွင့်ကြည့် ကုဒ်တွေ အကြောင်း တစ်ခုမှ နာမလည်းလို့ခင်ဗျ
Facebook ပေါ်က လိုချင်တဲ့ Status တွေ ဆိုရင် ScreenShot ပဲ လုပ်လုပ်နေရတာ ပြန်ကြည့်ရင်လဲ သိပ်မဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ အဲဒါလေးများဖြစ်နိုင်မလားနော် Facebook Status စာသားတွေကို ကော်ပီယူဖို့ Flex နဲ့များဖြစ်နိုင်မလား နော် အစ်ကိုတို့ ခင်ဗျ ဖြစ်နိုင်ရင်ကုဒ်အကြောင်းနားလည်တဲ့ အစ်ကိုတို့များ ကျနော် အဲဒါလေး တစ်ခုလောက် ကူညီပေးပါလားခင်ဗျာ. .